फायरफक्समा तपाईंको IT विभाग कुरा गर्नुहोस् Martech Zone
फायरफक्समा तपाईंको आईटी विभाग कुरा गर्नुहोस्
बिहीबार, डिसेम्बर 4, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मलाई लाग्छ म विगतमा धेरै खराब भएको छु जब यो आईटी विभागहरूको आउँदछ। म मेरो पहिलो काम मा एक नेटवर्क चलाएँ र विभाग मा सबै खेलौना संग मान्छे थियो (समय मा मेरो निर्देशक को छेउमा, म पहिले सधैं उनको लागि एक किन्नुभयो)।
मार्केटिंग र टेक्नोलोजीमा बिभिन्न कामहरू बीच स्थानान्तरण गर्दा मलाई आईटी ढोका दुबै पक्षमा राखिएको छ ताकि म कसरी जान्दछु निराश पार्नु यो तपाइँलाई आवश्यक उपकरणहरू छैन। यद्यपि यसलाई समर्थन गर्न अझ गाह्रो छ, म दृढ विश्वास हुँ कि टेक्नोलोजीले प्रगति र दक्षता ल्याउँदछ। यो गर्न सक्दैन यदि तपाईं लक हुनुभयो भने। मेरो राम्रो मित्र एडम सानो, जो एक चलाउँछ मोबाइल मार्केटिंग कम्पनी यहाँ इंडियानापोलिस, यो उत्तम राख्दछ ... तपाइँको आईटी विभाग हो सक्षम पार्दै तपाईं वा असक्षम गर्दै तिमि?
म मेरो वर्तमान कामको साथ ढोकाको बजार पक्षमा छु र नियमहरू मार्फत खेल्ने प्रयास गर्दै छु - तर यो सजिलो छैन। म त्यहाँ सबै उत्तम सफ्टवेयर जान्दछु जुन मेरो दिनको स्ट्रिम गर्दछ - र म यसको कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्दिन। म अहिले पिसिमा छु, मेरो विश्वासी मकको सट्टा। यो एकदम असुविधा हो।
मँ चुनौतीको लागि छु, यद्यपि! गनगन भन्दा (मेरो ब्लग बाहिर) भन्दा, म नियमहरू द्वारा खेल्न सक्दछु जुन म गर्न सक्छु र मद्दत गर्न त्यहाँ के छ भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गर्छु। मेरो सबैभन्दा ठूलो मुक्तिदाता फायरफक्स चलाइरहेको छ। यो केवल एक शानदार ब्राउजर मात्र हो, तर एड-अनहरू वास्तवमै एकदम अविश्वसनीय छन्:
FireFTP - एक शानदार FTP अनुप्रयोग हो जुन म सीधा फायरफक्समा चलाउन सक्छु। यो नि: शुल्क हो (तर कृपया दान गर्नुहोस् - सबै दानको आधा दानमा चल्दछ)। यो एक मजबूत FTP ग्राहक को लागी तपाईलाई चाहिने सबै चीज भयो!
ट्विटबिन - एक ट्विटर ग्राहक हो जुन फायरफक्स साइडबारमा दायाँ जान्छ। यो तपाईको आफ्नै ग्राहक चलाउने जत्तिकै सहज छैन टहर्ल, तर यो चाल गर्दछ। काश तिनीहरूले जवाफहरू बाट डायरेक्ट सन्देशहरू, आदि जान सजिलो बनाउनको लागि यसमा केही ट्याबहरू राख्दछु।
फायरबग - HTML, CSS र जाभास्क्रिप्ट मुद्दाहरूको तपाइँको वेबसाइटसँग समस्या निवारण गर्न मद्दत गर्नको लागि बजारमा त्यहाँ उत्तम उपकरण छैन। अरू साइटहरूले कसरी शान्त प्रभावहरू बनाउँदैछन् भनेर गहिरो खोजी गर्न चाहनुहुन्छ? फायरबग अविश्वसनीय छ!
रङजाल्ला - कहिले वेब पृष्ठबाट रंग प्राप्त गर्न आवश्यक छ? यो गर्नको लागि महान सानो उपकरण!
Greasemonkey - एक अद्भुत एड-अन जसले तपाईंलाई लेख्न र पृष्ठहरूमा तपाईंको आफ्नै स्क्रिप्टहरू समावेश गर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ लाखौं आकर्षक GreaseMonkey स्क्रिप्टहरू छन् जुन तपाईंलाई जीमेल र अन्य अनुप्रयोगहरूको एक टनको साथ मद्दत गर्न सक्छ। चेक आउट गर्नुहोस् ग्रीसस्पट भर्खरको लागि!
अद्यावधिक: Greasemonkey संग CAUTION प्रयोग गर्नुहोस्, त्यहाँ स्क्रिप्टहरू छन् जुन वित्तीय वेबसाइटहरूको लागि लगइन जानकारी क्याप्चर गर्न कोशिस गर्दछ।
CoolIris - एक आश्चर्यजनक रमाइलो एड-अन जुन तपाईंको पीसी वा म्याकलाई मिडिया ब्राउजिing राक्षसमा बदल्छ!
फक्सक्लोक्स - के समयक्षेत्रहरूले तपाईलाई भ्रमित गर्छन्? यो एक उपयोगी सानो एड-अन हो जुन तपाईंलाई विश्वको वर्तमान समयमा प्रदान गर्दछ।
ScribeFire - त्यहाँ एक ब्लग सम्पादक पनि छ जुन तपाईं फायरफक्समा राख्न सक्नुहुन्छ जुन XML-RPC प्रयोग गर्दछ, सामग्री पोष्टिंगको लागि धेरै ब्लगिंग प्लेटफर्महरूमा मानक। म यो प्रयोग गर्दिन, म WordPress मा 'ओएल' सम्पादकमा टाँसिनँ, तर यो अझै उत्कृष्ट छ!
सायद यसको उत्तम पक्ष यो हो कि तपाईंलाई सामान्यतया यी एड-अनहरू स्थानीय रूपमा स्थापना गर्न प्रशासक अधिकारहरू आवश्यक पर्दैन, त्यसैले तपाईं आईटी मान्छेलाई बग नगरी तपाईको निपटानमा धेरै उत्कृष्ट उपकरणहरू राख्न सक्नुहुन्छ। फायरफक्स आज स्थापित गर्न आईटी साथीहरू प्राप्त गर्नुहोस्! अवश्य पनि, यदि फायरफक्सले तपाईंमा क्र्यास गर्न थाल्छ ... तपाईंको आईटी मद्दत डेस्कलाई कल नगर्नुहोस् ... ती एड्-अनहरू हटाउन सुरु गर्नुहोस्!
टैग: -On थप्नएडोबफायरफक्सफायरफक्स एड्-अनहरूमार्केटिंग add-onsरिपोर्टिंग
यो सप्ताहन्त: इन्डियानापोलिस स्टार्टअप वीकएन्ड
धेरै थोरै यो मास्टर भाइरल गर्न सक्छन्!
4 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 9:26 बजे
4 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 9:50 बजे
4 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 9:58 बजे
डिसे 5, 2008 मा 9: 58 AM
4 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 10:10 बजे
केवल मेरो2सेंट।
Apolinaras "अपोलो" Sinkevicius
डिसे 5, 2008 मा 11: 47 AM
5 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 5:50 बजे
7 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 9:59 बजे
जुन 22, 2012 बिहान 10:52 बजे